“ ကြွက် ” mouse , Mickey and Hamster | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » “ ကြွက် ” mouse , Mickey and Hamster
“ ကြွက် ” mouse , Mickey and Hamster
Posted by Don Juan Ronald on May 27, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 13 comments
ကြွက် သေ တ ကောင် အရင်း ပြု ။
လွန် ခဲ့ သော နှစ် ပေါင်း ၅၀ ကျော် လောက် က ၊ အ များ ပြည် သူ ၏ ဆန္ဒ မဲ ဖြင့် ရွေးကောက် တင်မြောက် ထား သော ဦးနု အစိုးရ ခေတ် မှာ ကျနော် တို့ အလယ်တန်း ဗမာ စာ ဖတ်စာ အုပ် ထဲ တွင် “ ကြွက် သေ တ ကောင် အရင်း ပြု ” ဆို သော သင်ခန်းစာ တစ် ပိုဒ် ကို သင် ကြား ရ ပါ သည် ။
၎င်း သင်ခန်းစာ ၏ အကြမ်းဖျင်း ဆိုလိုရင်း မှာ လူ တ ယောက် သည် ကြွက် သေ တ ကောင် ကို ယူ ၍ ၊ ကြောင် မွေး ထား သော လူ ကို သွား ရောက် ရောင်း ချ ပြီး ရ လာ သော ငွေ ဖြင့် တ စ ၊ တ စ ခြင်း ကြိုးစား အား ထုတ် ပြီး အလုပ် လုပ် ခဲ့ ရာ နောက် ဆုံး သူဌေး ဖြစ် သွား သည့် အ ကြောင်း ဖြစ် ပါ သည် ၊ သေချာ အ ပြည့် အ စုံ ကို တော့ မ မှတ်မိ တော့ ပါ ( ဤ သင် ခန်း စာ ကို အပြည့်အစုံ မှတ် မိ သော ပုဂ္ဂိုလ် များ ရှိ ရင် မ စ ပေး ပါ ရန် ၊ ကျေး ဇူး တင် ပါ သည် ) ၊ ထို ဖတ် စာ အုပ် ပြု စု သူ ၏ စေတနာ က တော့ လူ တွေ ကြိုးစား အောင် အား ပေး ထား ချင်း ဖြစ် ပါ သည် ။
၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက် နေ့ နောက် ပိုင်း ဗိုလ် ရှုမောင် တို့ အုပ်စု ( ပြည်သူ့ မျိုး ချစ် တပ်မတော် ဆို လား ? ) တိုင်း ပြည် ကို အတင်း အဓမ္မ အုပ်ချုပ် လာ တဲ့ အခါ ၊ ဒီ “ ကြွက် သေ တ ကောင် အရင်း ပြု ” ဆို သော သင်ခန်းစာ သည် ခေါင်း ပုံဖြတ် အရင်းရှင် စနစ် ဆိုး အတွေးအခေါ် ဖြစ် ပြီး ၊ မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန် ဖြင့် ချီ တက် နေ တဲ့ ဆိုရှယ်လစ် စနစ် နဲ့ လုံး ဝ မဟပ်ဆပ် သည့် အ တွက် ၊ ၎င်း သင်ခန်းစာ ကို လုံး ဝ သင် ကြား ခွင့် မ ပြု တော့ ပါ ။ အ ကြောင်း ရင်း က တော့ ရှင်း ပါ သည် ကြွက် သေ ကို အ ရင်း ပြု သော သူ သည် ဦးဏှောက် ကို အ ခြောက်ခံ ၊ ဥာဏ် ကို အ သုံး ပြု ပြီး အချိန် အ တော် ကြာ ကြိုးစား မှ သူဌေး ဖြစ် လာ နိုင် ခဲ့ ပါ သည် ။ “ ပြည်သူ့ မျိုး ချစ် တပ်မတော် ” တွေ ရဲ့ လုပ် ပုံ က တော့ မ တူ ပါ ၊ ၎င်း တို့ ၏ စွမ်း ရည် သည် အ လွန် ထက်မျက် ပြီး short to the point ဘဲ လုပ် တတ် သည် ၊ ဥပမာ –
ပြည်သူ့ မျိုး ချစ် တပ်မတော် သည် ၎င်း တို့၏ ဗျောက် များ ( ကျ နော် တို့ ခေတ် မှာ ခြောက်လုံးပြူး သေနတ် ကို ဗျောက် ဟု တင်စား ထားသည် ) ကို ခါး မှာ ချိတ် ၍ ၊ သူ တပါး ၏ စတိုးဆိုင် များ ၊ ကုမ္ပဏီ များ ၊ စက်ရုံ များ ၊ ဆေးရုံ များ နှင့် စာ သင် ကျောင်း များ ထဲ သို့ ဝင် ရောက် သွား ပြီး “ နိုင်ငံတော် ၏ ရှေး ရေး ကို မျှော် ကိုး ၍ အ များ ပြည် သူ ၏ အကျိုး ကို ရှေ့ရှု လျက် ၊ မြန်မာ့ နည်း မြန်မာ့ ဟန် နှင့် အ ညီ ၊ ချီ တက် နေ တဲ့ ဆိုရှယ်လစ် စီးပွား ရေး စနစ် ၏ လို အပ် ချက် အရ ၊ ဒါ တွေ အား လုံး ကို အများ ပြည် သူ အတွက် ပြည်သူ ပိုင် သိမ်း လိုက် ပါ ပြီ ” တဲ့ ။
ကဲဗျား ~~ ဟို လူ က ကြွက် သေ ကြီး ကို ကိုင် ပြီး ကားယား ကားယား နဲ့ ကြောင်ကြီး ကို လိုက် ရှာ ၊ ဟုတ် ပေါင် ယောင် လို့ ၊ ကြောင် မွေး ထား တဲ့ လူ ကို လိုက် ရှာ နေ တုံး မှာ ၊ သူ များ ပြည်သူ့ မျိုး ချစ် တပ်မတော် ဟာ နေ့ချင်း ညချင်း စတိုးဆိုင် ပိုင် ရှင် များ ၊ ကုမ္ပဏီ ပိုင် ရှင် များ ၊ စက်ရုံ ပိုင် ရှင် များ ၊ ဆေးရုံ ပိုင် ရှင်များ နှင့် စာ သင် ကျောင်း ပိုင် ရှင် များ ဖြစ် ကုန် ကြ ပြီ ၊ တကယ် တော့ ၊ ကိုယ် နဲ့ မဆိုင် တာ ၊ ကိုယ် က မကျွမ်း တာ လျှောက် ဝင် လုပ် ၊ ဝင် ဖက်စွက် တော့ ဒီ လို နဲ့ နောက် ကြောင်း ဘယ် လို ဆက် သွား ဘယ် လို ဖြစ် သွား တယ် ဆို တာ အ များ အ သိ ဘဲ ပေါ့ ။
ထို့ ကြောင့် ယခု ခေတ် ခ လေး တွေ အရင် ခေတ် လူ ကြီး တွေ လို ဘာ မ ဆို အလကား ရ ချင် တဲ့ စိတ် ဓါတ် မ ရှိ စေ ရန် ၊ အဲ လို မျိုး စိတ်ဓါတ် မ မွေး ရန် နှင့် အလုပ် ကို ကြိုးစား စိတ် ရှိ အောင် ၊ ထို “ ကြွက် သေ တ ကောင် အရင်း ပြု ” ဆို သော သင်ခန်းစာ ကို ပြန် လည် ပြဌာန်း သင် ကြား ပေး သင့် ပါ ကြောင်း ။
ကြွက် တ ကောင် ရဲ့ တန် ဖိုး (၁) ။
ဗမာ ပြည် မှာ နေ ခဲ့ စဉ် က အ ကယ် ၍ နေ အိမ် တွင် ကြွက် များ သောင်း ကျန်း ရင် များ သော အား ဖြင့် ကြွက် ထောင်ချောက် အညှပ် မျိုး နဲ့ ထောင် ဖမ်း လေ့ ရှိ ပါ သည် ၊ ထိုင်ဝမ် နိုင်ငံ မှာ တော့ အဲ ဒီ လို ညှပ် တဲ့ ထောင်ချောက် ကို ဝယ် ချင် ရင် ဝယ် လို့ မ ရ ပါ ၊ ရောင်း တဲ့ လူ ကို အစိုးရ က တိရစ္ဆာန် ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက် ခြင်း ဥပဒေ နဲ့ အ ရေး ယူ နိုင် ပါ သည် ။ ဒီ အ ကြောင်း မ သိ လို့ ဗမာ ပြည် ပြန် တုံး က ကြွက် ထောင်ချောက် အညှပ် ကို ဝယ် ခဲ့ မလို့ စဉ်း စား မိ သေး တယ် ၊ ကံ ကောင်း လို့ မ ဝယ် ဖြစ် ခဲ့ တာ ၊ နို့ မ ဟုတ် ရင် လေ ဆိပ် မှာ ဒါဏ် ငွေ ကောင်းကောင်း လေး ဆောင် ရ ပါ လိမ့် မယ် ။
ကျနော် တို့ ထိုင်ဝမ် မှာ ကြွက် ဖမ်း ခြင် ရင် ၊ ကြွပ် ကို ကပ် နိုင် တဲ့ ကော်စေး ချပ်ပြား ကို သုံး ရပါ တယ် ၊ ၎င်း ချပ်ပြား ကို တ ခါ ဝယ် ရင် နှစ် ချပ် တွဲ ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာ ၆၀ ပေး ၇ ညပီး2US $ လောက် ပေါ့ ၊ ဒါ ကြောင့် တချပ် ကို ကြွက် တ ကောင် တည်း သာ ဖမ်း မိ မယ် ဆို ရင် အဲ ဒီ ကြွက် ၏ တန် ဖိုး ဟာ တစ်$ ပေါ့ ၊ ဖမ်း မိ သော ကြွက် ဦး ရေ များ သည့် အ မျှ ကြွက် ရဲ့ တန် ဖိုး လည်း လျှော့ ကျ သွား နိုင် ပါ သည် ။
ဘယ်ကြွက်က သွား ချိတ် မှာ လဲ ?
တရံရောအခါ အစား အ သောက် ထုတ် လုပ် သော စက် ရုံ တ ရုံ ၌ ၊ ရာ ဂ ဏန်း နှင့် ချီ သော ကြွက် များ သည် ပျော် ရွှင် စွာ စား သောက် ပြီး နေ ထိုင် ကြ ပါ သည် ၊ စက် ရုံ ပိုင် ရှင် သည် ဂျပန် နိုင်ငံ မှ လွန် စွာ အ စွမ်း ထက် သော ကြောင်ကြီး တ ကောင် ကို ပင့် ခဲ့ ပါ သည် ၊ ကြောင် ကြီး သည် လည်း တာ ဝန် ကျ ရာ သို့ ရောက် ရောက် ချင်း ၊ ကြွက် များ ကို ပါးစပ် တွင် တ ကောင် ၊ ခံ တွင်း တွင် တ ကောင် ၊ အာ ခေါင် မှာ တ ကောင် ၊ အစာ အိမ် မှာ တ ကောင် ၊ အူ မ မှာ တ ကောင် ဆက် တိုက် စား သုံး ပြ လိုက် ပါ သည် ။
( အ ထက် ပါ ကြောင် ကြီး သည် ၊ ကျနော် မျိုး အင် မတန် မှ ရိုသေ လေး စား သော ရွာ ထဲ မှ ဆရာကြီး ကြောင်ကြီး ဖြစ် လိမ့် မည် ဟု ကျနော် မျိုး လုံး ဝ မ ယူ ဆ မိ ပါ ၊ ယူ လည်း မ ယူ ဆ သင့် ပါ ၊ အ ကယ် ၍ ဟုတ် ခဲ့ ရင် လည်း တိုက်ဆိုင် မှု တာ ဖြစ် ပြီး တောင်း ပန် ပါ သည် )
ကြွက် များ သည် ကြီးမား သော အန္တရာယ် ကို သိ မြင် လာ ကာ ၊ အ ရေး ပေါ် ညီလာခံ ( ဘာ ကြောင့် အစ် ကို ဖြစ် တဲ့ လူ က လာ မ ခံ တာ လည်း စဉ်း စား လို့ မ ရ ပါ ) ခေါ် ယူ လိုက် ပြီး ၊ အောက် ပါ ဆုံးဖြတ် ချက် ကို ကန့် ကွက် မဲ လုံး ဝ မရှိ ဘဲ အ တည် ပြု လိုက် ပါ သည် ။
“ ကြောင် ကြီး ၏ လှုပ်ရှား မှု ကို ကြို တင် သိ ရှိ နိုင် ရန် ၊ ကြောင် ကြီး ၏ လည်ပင်း မှာ Bell တ လုံး သွား ရောက် ချည်နှောင် ထား ပေး သင့် ပါ ကြောင်း ”
အချိန် နှစ် ပါတ် ခန့် ကြာ သွား သော် လည်း Bell သွား ချည် တဲ့ ကောင် ကို ရွေး ချယ် တင် မြောက် နိုင် ခြင်း မ ရှိ ခဲ့ ပါ ။ ထို အ ခါ ကြွက် အစည်းအရုံး ဥက္ကဌ သည် ၊ တရုတ် ပြည် ကြီး ၏ ဟောင်ကောင် တွင် ရှိ သော Walt Disney မှာ အ လုပ် ဆင်း နေ သည့် Mickey Mouse ကို လှမ်း ပြီး အ ကူအညီ တောင်း လိုက် ပါ သည် ၊ Mickey က ကြွက် အစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ထံ သို့ အောက် ပါ အကြံအဥာဏ် ပေး လိုက် ပါ သည် ။
GPS system ပါ သော smart phone တ လုံး ကို ကြောင်ကြီး အား ဆက်သ လိုက် လျှင် ၊ ကြောင်ကြီး ၏ သွား လာ လှုပ်ရှား မှု အား လုံး ကို ဂြိုလ်တု က နေ တ ဆင့် ထပ် ချပ် မ ကွာ သိ ရှိ နိုင် ပါ သည် ဖြစ် ကြောင်း ၊ ယခု အ ခါ ကြောင်ကြီး နဲ့ ပါတ်သက် နေ သော အရာ အား လုံး ကို အ နောက် ပိုင်း သတင်း ရပ် ကွက် မှ အနီးကပ် လေ့လာ သုံးသပ် လျှက် ရှိ နေ ပါ ကြောင်း ။
ကြွက် တ ကောင် ရဲ့ တန် ဖိုး (၂ ) ။
လွန် ခဲ့ သော နွေရာသီ ကျောင်း ပိတ် ရက် ၊ ကျနော့ အဘွားကြီး ( မိုင် ဝိုက်F်) ၏ တူမ ဖြစ်သူ ဗမာ ပြည် မှ ထိုင်ဝမ် သို့ တက္ကသိုလ် လာ တက် သော ကောင်မလေး သည် ၊ သူ မ တက် ရောက် သော ကျောင်း မှ တရုတ် ပြည် ကြီး သို့ summer camp သွား ရန် ရှိ ပါ သ ဖြင့် ၎င်း မွေး ထား သော pet ဖြစ် တဲ့ ကြွက် မျိုး ရင်း ထဲ က Hamster လေး တ ကောင် ၊ အ ဆောင် တွင် ကြည့် ရှု စောင့် ရှောက် ပေး မည့် လူ မ ရှိ သည့် အ တွက် ၊ သူမ ၏ အဒေါ် ( မိုင် ဝိုက်F်) ထံ လာ ရောက် အပ် နှံ ထား သွား ပါ သည် ။ သုံး ရက် ခန့် ကြာ တဲ့ အ ခါ ၊ ထို ကြွက် ကလေး ဟာ မစားမသောက် ဘဲ နုံး နေ တော့ သည် ၊ အဘွာ ကြီး လည်း လန့်ဖြတ် ပြီး ၊ သူ များ တကူးတက ကြီး လာ အပ် ထား တာ ၊ တခုခု ဖြစ် သွား ရင် အားနာ စရာ ကောင်း တယ် ဆို ပြီး ၊ ဆိုင်ကယ် နဲ့ ကြွက် ကို မ ၍ pet ဆေးခန်း ကို သွား ပြ တာ ပေါ့ ။
pet ဆေးခန်း တော့ အ များ ကြီး ရှိ ပါ တယ် ၊ သို့ သော် လည်း များ သော အား ဖြင့် ခွေး နှင့် ကြောင်ကြီး ကို သာ ကုသ ကြ တာ များ တယ် ၊ အဘွား ကြီး လည်း တ ဆိုင် တက် တဆိုင် ဆင်း နဲ အဲ ကလို လိုက် လှန် စုံစမ်း ရှာဖွေ ရာ ၊ Taipei County မှ Taipei City သို့ ရောက် သွား ပြီး ၊ ဆေး ခန်း ကို တွေ့ လိုက် သော် ငြား လည်း ၊ ဆေး ခန်း က ကောင် မ လေး က ဘွား တော် ကို “ အန်ဒီ ~ booking လုပ် ထား သလား ? မ လုပ် ထား ရင် ဒီ နေ့ လုပ် ထား လိုက် ၊ ပြီး ရင် မနက်ဖြန် မှ လာ ပြ လိုက် ” တဲ့ ။
အဘွား ကြီး လည်း မ နဲ တောင်း ပန် ပြီး “ အန်ဒီ စောင့် နေ မယ် အားလုံး ပြီး လို့ နောက် ဆုံး မှ ကြည့် မယ် ၊ ဒီ နေ့ ကြည့် ဖြစ် အောင် လုပ် ပေး လိုက် ပါ ”
နှစ် နာ ရီ ခန့် ကြာ သော အ ခါ ဘွားတော် အ လှည့် ၊ ဟုတ် ပေါင် ကြွက် အ လှည့် ။
အမယ် ~~~ကြွက် ကို လည်း file တွဲ နဲ့ဗျ ၊ P C ထဲ ကို လည်း ရိုက် သွင်း ရ သေး တယ် ။
နာမည် ၊_ _ _
မွေးနေ့၊_ _ _ _
အ ထက် ပါ သုံး ခု စလုံး က တော့ မ သိ ဘူး ပေါ့ ၊ ကိုယ် ပိုင် မှ မဟုတ် တာ ။
နေ ရပ် လိပ် စာ နဲ့ ဖုံး နံပါတ် ကို ရေး ပြီး နောက် ၊ ဆရာဝန် က ကြွက် ၏ သွား ကို စစ်ဆေး တယ် ၊ အာ ခေါင် ကို ကြည့် ပေး တဝ် ။ ပြီး ရင် ကြွက် ၏ မဆင် ကို ဓါတ် ခွဲ ကြည့် ပေး တယ် ၊ အား လုံး ပေါင်း ဆေးဖိုးဝါးခ ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာ ၅၀၀ US 16$ ခန့် ပေး ဆောင် ရ ပြီး result က တော့ ဘာ မှ မ ဖြစ် ပါ ၊ ရာသီဥတု ပူ လို့ တဲ့ ၊ ကြွက် အ တွက် အား ဆေး ရည် ပေး ၍ ဘွားတော် ကို ပြန် လွှတ် လိုက် သည် ၊ ပြီး တော့ ကြွက် ကို Air con ဖွင့် ထား ပေး လိုက် ပါ တဲ့ ။
ကျနော် တို့ က သူ များ အိမ် ကို ငှား ပြီး နေ တာ ၊ Air con မ ရှိ ပါ ဘူး ။
ည ကျနော် အလုပ် က နေ ပြန် ရောက် လာ တော့ ( မိုင် ဝိုက်F်) က ငို၍ရယ်၍ မ ရ သော မျက် နှာ နဲ့ ဒီ အ ကြောင်း စုံ ကို ပြန် ပြော ပြ တော့ ၊ ကျနော် သည် ဘွားတော် ကို သနား ရ မည့် အစား ၊ မပြု လုပ် သင့် မပြု လုပ် ထိုက် သော အ လုပ် တခု ကို လုပ် မိ လိုက် ပါသည် ၊ ၎င်း အလုပ် သည် ကား ဟက်ဟက် ပက်ပက် နဲ့ ပိုက် နာ အောင် ရယ် လိုက် ချင်း ဖြစ် ပါ သည် ၊ “ ဒီ ကြွက် ကို ငါ Air con တခု ဝယ် ပေး ရ မယ့် ပုံ ပေါ် နေ ပြီ ဟု ထပ် နှောက် လိုက် သေး သည် ။
အဘွား ကြီး လည်း ခါ တိုင်း ဆို ကပ်စေး နဲ ပြီး ချွေချွေ တာတာ နဲ့ နေ ထိုင် ခဲ့ တာ ၊ ဒိုင်း က နဲ ကြွက် တ ကောင် အ တွက် ငွေ ၅၀၀ အလကား သုံး လိုက် ရ သည့် အ တွက် တော့ စိတ် ဘယ် ကောင်း မှာ လည်း ။
ငွေ ၅၀၀ နဲ့ အတွေ့ အကြုံ တခု နှင့် ဟာသ တ ခု ကို ဝယ် လိုက် ရ တာ ပေါ့ ကွယ် ~~~။
ယ ခု အ ချိန် မှာ ကျ နော် လည်း ထိုင်ဝမ် ငွေ ၄၅ ကျပ် နဲ့ Hamster ကြွက် တ ကောင် ဝယ် မွေး ထား လိုက် ပါ ပြီ ။
ကျနော်မွေးထားသော Hamster ကြွက်ကလေးပါ။
ကျနော့ အရေး အသား ကို သည်းညည်းခံ ပြီး ဖတ် ပေး သော မိတ်ဆွေ များ အား လုံး ကို နှစ်လုံးသား အ တွင်း မှ အထူး ကျေး ဇူး တင် ပါ သည် ခင်ဗျာ ~~~
မော ပန်း သွား တယ် ဆို ရင် လည်း တောင်း ပန် ပါ တယ် ။
အား လုံး ရွှင် လန်း ချမ်း မြေ့ ကြ ပါ စေ ။
တိုင်ဝမ်မှာ Hamster က ဈေးပေါလှချည့်လား
ဒီမှာ မြန်မာငွေ တော်တော်ပေးရတယ်
ဗ မာ ငွေထောင့်ငါးရာ လောက် ပေါ့ ဆရာ ရေ ~~~
အဲဒီး ဆေးဘူးအဖြူထဲ ထဲ့ပိတ်ထားတာလား
ဆေး ဘူး အောက် ခြေ က ဟောင်း လောင်း ပါ ဖေါက် ထား ပါ တယ် ။
ဓါတ် ပုံ ရိုက် တဲ့ အ ခါ ငြိမ် အောင် အဲ ဒီ ဆေး ဘူး လေး နဲ့ ချုပ် ထား ချင်း ဖြစ် ပါ သည် ။
ခါ တိုင်း တော့ လောင် အိမ် မှာ ထား ပါ တယ် ။
” အဲဒီ ဆေးဘူးအဖြူထဲ ထဲ့ပိတ်ထားတာလား ”
တွေးရက်ပါပေ့ ဆရာရယ် ။
ကြွက်ကို ကော်နဲ့ ကပ်ဖမ်းတာက ပို ရက်စက်တာမဟုတ်ဘူးလား .. ညှပ်က တစ်ခါတည်း သေချင်သေသွားတာ ။ ကော်နဲ့ က မသေနိုင် မပြေးနိုင်ဘဲ အော်နေရတာ ။ မြန်မာပြည်မှာဆို သတ်လည်း မသတ်ရက်ကျတော့ သွားလွှတ်ပစ်ထားပြီး ကြွက်ခမျာ အစာရေစာပါငတ်ပြီးသေတာ…
ကြွက်က ထောင်ခြောက် ညှပ်မိနေရင်.. မချိမဆန့်လေ..။ ခေါင်းဆိုသွေးတွေထွက်ပြီး.. ကလေးတွေပါ…. အမြင်ရဆိုးတယ်..
ကော်ကတော့.. လူမသိဘူး..။ အော်ဖို့ပါးစပ်ဟရင်.. ပါးစပ်ကပ်.. ခေါင်းလှုပ်ခေါင်းကပ်နဲ့.. အဲဒီကော်ပြားကို.. ၂ဖက်ပိတ်လိုက်ပြိး အမှိုက်ပုံထဲထည့်လိုက်ရင်.. ပြတ်ကရော..
သိပ် မှန် တာ ပေါ့ ဆရာ ထူးဆန်း ရေ ~~~
ဒါ ပေ သည့် ဒီ က ကောင် တွေ က ဒီ လို မ စဥး စား ဘူး ၊
အ ခ မသင့် လို့ pet ဖြစ် တဲ့ ကြောင် ကြီး နဲ့ ခွေး က လေး ကို ညှပ် မိ မှာ စိုး လို့ တဲ့ ။
လော က မှာ ဇောက် ထိုး မိုး မျှော် ကိစ္စ တွေ အ များ ရှိ ပါ တယ် ။
ပြော လို့ မ ကုန်း ပါ ဘူး ။
အော် သူတို့ အတွေးကလည်း အဲ့လိုရှိသေးတာကိုး ။ ဒီမှာတော့ တချို့ယင်ကောင်တွေ အပြုံလိုက်ကပ်နေတာမြင်ရင်တောင် တမျိုးကြီး။
အိမ်က ညီမလည်း ဟမ်းစတားလေး ၂ ကောင်ဝယ်မွေးဖူးတယ်။ တကောင်ကဆိုးတော့ ကိုက်တာလား ကုတ်တာလား မသိဘူး မျက်လုံးပေါက်ပြီး တကောင်သေသွားတယ်။ နောက်မွေးတာတွေလည်း အဲ့လိုပဲ ကိုက်သတ်လို့ တကောင်ထဲပဲ ထားရတော့တယ်။ ခုတော့ သူလည်း သေသွားရှာပြီ။
အဲ့ဒီကထဲက သူလည်း ထပ်မမွေးတော့ဘူး။
အဲ့ဒီဘက် က ရာသီဥတုက ဒီမှာလိုတော့ အရမ်းမပူလောက်ဖူးထင်တယ်နော်။
တီလုပ်ပြီမှာ …ကျောင်းတက်နေတဲ့ တူမဂလေး ရှိတယ်တဲ့ …
သေချာပေါက် တားတားတို့ အရွယ်ဝတ် ကလေး ဖြစ်မှာဘဲ …
နာမည်လေး ဘို ခေါ်တုန်း ဟင်င်င်…
အီးမေးလ်လေး ..စာမျက်ခွက် လိပ်စာလေးများ ပြောပြဂျင်ဝူးလား ဟင်င်င်င်…
ဟိုအပေါ်က အာပျိုဂျီးတွေလို တစ်ကိုယ်တည်း ဟမ်းမစတားလေးနဲ့
အရိုးထုတ်ရမှာ ကိုဖြင့်… တွေးရင်း တွေးရင်း
စိုးတယ် …စိုးမိတယ်… စိုးထိတ်မိပါတော့တယ်ဗျာ…
ဘဘတရုတ်ဦးပေါ်ဦးက ဟမ်းစတား အကြောင်းပြုပြီး သမိုင်းလေးပါ ပြောပြသွားတာပဲ။
ဟမ်းစတားက အိမ်မှာ မွေးထားလို့ လွတ်သွားရင် တွေ့သမျှ အကုန်ကိုက်တတ်တယ် ဆိုလား ကြားဖူးတယ်။ ချစ်စရာ ကောင်းပေမဲ့ အကိုက်သန်လို့ လျှောက်ကိုက်မှာ ကြောက်လို့ မမွေးရဲဘူး။